छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन्, यस्तो रहेछ कारण « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन्, यस्तो रहेछ कारण
११ पुष २०७५, बुधबार १५:३० मा प्रकाशित
प्रत्येक वर्ष इंग्ल्यान्ड र वेल्समा छोरीभन्दा छोरा बढी जन्मिरहेका छन् । किन त ? सन् १८३८ मा रेकर्ड राख्न थालिएदेखि प्रत्येक वर्ष च्याँ गर्ने शिशुमा छोराकै संख्या बढी छ । यो एक वर्षको मात्र कुरा हैन । रानी भिक्टोरियाको शासनकालदेखि नै छोरीहरूको तुलनामा छोराहरू बढिरहेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष जन्मिने छोरीको तुलनामा छोराको संख्यामा वृद्धिको यो संरचना लगभग १८० वर्षदेखि देखिँदै आएको छ । वास्तवमा प्रत्येक १०० छोरीमा १०५ छोराको जन्म अनुपातलाई सामान्यतया प्राकृतिक मानिन्छ ।
यो अनुपात चीन र भारत जस्ता देशमा बढी छ किनकि छोरालाई त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ । अचम्मको कुरा त, यो अनुपात १७औं शताब्दीदेखि छ । यो अनुपात किन अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा पूर्णतया बुझिएको छैन तर यससम्बन्धमा अनेकौं सिद्धान्त छन् ।
त्यसमा मातापिताको उमेर, महिलाको डिम्बोत्सर्जन चक्र, दबाबको स्तर र यौन आसन लगायत पक्ष पर्छन् । एक लोकप्रिय सिद्धान्त के पनि छ भने डिम्बोत्सर्जनभन्दा कैयौं दिनअघि यौनकर्म गर्दा छोरी पाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अनि त्यसपछि यौनकर्म नगर्दा बढी बाँच्ने तर पुरुष वीर्यभन्दा कम गतिमा पौडने महिला वीर्य बढी समय रहिरहन्छ । यसको विपरीत डिम्बोत्सर्जनको समय वरपर यौनकर्म गर्दा राम्रोसँग पौडने वीर्य डिम्बमा छिटो पुग्छ र छोरा जन्मिन्छन् ।
मातापिताले यी तरिकाहरूको गुणगान गरेपनि वैज्ञानिकहरूले यस्ता कुराले फरक पार्ने विषयमा खासै प्रमाण नरहेको बताएका छन् । केही अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने मातापितामा दबाब हुँदा बढी छोरी जन्मिन्छन् भने युद्ध र द्वन्द्वका समयमा बढी छोरा जन्मिन्छन् ।
यौनकर्मलाई योजना बनाएर गर्दा लिंगनिर्धारणमा प्रभाव पार्दैैन भने गर्भाधानको समयमा केही अन्य क्रियाकलाप हुन्छ त ? महिला र पुरुष उत्पादन गर्ने वीर्यको समान संख्या छ भने र लगभग उत्तिकै गर्भधारण हुन्छन् भने महिला भ्रूण बढी संख्यामा हराएर पुरुष भ्रूणलाई बढी संख्यामा राख्छन् ।
वैज्ञानिकहरूले ठ्याक्कै के हुन्छ र यसका कारण के हुन् भनी खुट्याउन गाह्रो हुने बताएका छन् । हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने पुरुष भ्रूणहरू बढी विकसित हुन्छन् र बढी पुरुष शिशु जन्मिन्छन् ।